मधेश आन्दोलनबाट स्थापित सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछिल्लो समय आदिवासी, जनजाति र खसलाई मिलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा जुट्नुभएको छ । । उहाँले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएर सबैलाई अच्चमित पनि बनाउनुभयो । हाल दोस्रो चरणको चुनाव सफल बनाउने तयारीमा रहनुभएका उपेन्द्र यादवसँग गोरखापत्रका पत्रकार सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अंशः
स्थानीय तहको चुनावको तयारी चलिरहँदा तपाईंको पार्टी अलि बढी नै चर्चा सुनिन्छ किन त्यस्तो छ ?
यो चर्चा बढी नकारात्मक रूपमा भइरहेको छ किन ?
तपाईंमाथि पनि आरोप छ, संविधान संशोधन नै नगराइकन चुनावमा भाग लिएको भन्ने, संविधान पुनःलेखनको कुरा उठाउने संविधान संशोधन नहुँदै चुनावमा भाग लिएर मधेश आन्दोलनलाई बीचमै छाडेको भन्ने यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– मैले बुझ्न नसकेको एउटा कुरा हाम्रो पार्टी चुनावमा भाग लिँदा केही दललाई किन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ? अहिले उहाँहरूको आन्दोलन राज्य केन्द्रित होइन, फोरम नेपालविरुद्ध भइरहेको छ त्यस्तो किन ? अहिलेसम्म उहाँहरूले यति पनि बुझ्न सक्नुभएको छैन कि आन्दोलन केका लागि गर्ने, कसको विरुद्ध गर्ने र किन गर्ने । राज्यसँग लड्नुपर्ने राजपा नेपाल अहिले फोरम नेपालविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । जो उहाँहरूको लागि यो ठूलो भूल हो । राजनीतिकमा हरेकको आ–आफ्नो विचार, दृष्टिकोण, एजेन्डा हुन्छ र त्यसैको आधारमा ऊ अगाडि बढिरहेको हुन्छ र हामीले पनि त्यही ग¥यौँ । हामीले कुनै आन्दोलन तथा मागलाई छाडेका छैनौँ । संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने अहिले पनि हामीहरूको माग हो, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्गको अधिकार संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि हामी कडा रूपमा उठाएका छाँै तर स्थानीय चुनाव पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक उपलब्धि हो र त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु के हाम्रो गल्ती हो ? लोकतन्त्रको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भनेको चुनाव नै हो । संसदीय राजनीतिक गर्ने दलले चुनावलाई बहिष्कार ग¥यो भने त्यो राजनीतिक संस्कार हुनै सक्दैन । प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै बाँकीका लागि सङ्घर्ष गर्ने हामीले नीति लिएका छौँ । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय चुनाव गणतन्त्र आएपछि हुन लागेको हो, के यो उपलब्धि होइन, यसलाई संस्थागत गर्नु गलत हो त ? सङ्घर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति नियमित चल्ने प्रक्रिया हो तर चुनाव भन्ने कुरा निश्चित समयमा आउँछ । त्यसलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र अर्को कुरा हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक संरचना देशैभरि रहेको छ । त्यहीअनुसार हामीले नीति बनाउनुपर्छ । त्यसैको आधारमा पार्टीभित्र योजना सेटिङ गर्नुपर्छ । राजपा नेपाल त आठ जिल्लामा मात्र सीमित छ । आठ जिल्लामा पनि प्रत्येक जिल्लामा भने जस्तो सङ्गठन छैन, अनि त्यो दलले त्यहाँको कुरालाई फोकस नगर्ने हो भने कहाँको गर्ने हो । अहिले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा गएर टाउको गिनेर नै सङ्गठनको हिसाब गर्ने हो, राजपा नेपालभन्दा फोरम नेपाललाई ठूलो पार्टीको रूपमा पाउनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूले हाम्रो विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । हाम्रो सङ्गठन र पार्टीप्रति त्यति घमण्ड छ भने मैदानमा आएर आजमाइस गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफू भाग लिने स्थानीय तहको चुनावमा जनताले भाग लिन खोज्दा खबरदार भन्नेप्रति मलाई दाया जागेर आउँछ ।
वैशाख ३१ गते एकै चरणमा देशैभरिको चुनाव सम्पन्न गराउने सरकारको निर्णय थियो तर पटक–पटक चुनाव सार्दै अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा हुने स्थानीय तहको चुनावलाई असोज २ गतेलाई पु¥याइएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
तपाईंको पार्टीले पहिलो चरणको चुनावमा भाग लियो, अहिले दोस्रो चरणको चुनावको तयारीमा हुनुहुन्छ, पहिलो चरणको चुनावमा त अपेक्षित सफलता हात लागेन नि ?
असार १४ गतेको चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ, दोस्रो चरणको चुनाव हुन लागेको क्षेत्रमा चुनौती पनि छन्, राजपा नेपाल, सिके राउत, सशस्त्र समूह, लिम्बूवान लगायतका चुनौती छन्, चुनाव कस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
अघि तपाईं भन्नुभयो कि सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर गल्ती गरेको छ, सरकार बनाउन त तपाईंको पनि सहयोग छ तपाईंबाट गल्ती भएको छ कि छैन ?
यसपालिको चुनावमा दलहरूको बीचमा अनौठो खालको तालमेल देखिएको छ, जुन यसअघिका चुनावमा भएका थिएनन्, यस्तो अवस्था किन आयो ?
विपरीत विचारका दलहरूसँग पनि तालमेल भएको छ जस्तै एमाले–राप्रपा, काँग्रेस–माओवादी, फोरम–एमाले जस्ता तालमेल भएका छन्, यो कसरी सम्भव भयो ?
– यो स्थानीय तहको चुनाव हो र स्थानीय स्तरमा पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति विशेषको बढी चर्चा हुन्छ । आफ्नो गाउँ ठाउँमा जोसँग कुरा मिल्यो उसैसँग तालमेल गर्छन् । यो स्थानीय स्तरको विशेषता हो । यसलाई अनौठो रूपमा लिनु हुँदैन तर अहिले जुन किसिमको तालमेल देखिरहनुभएको छ, त्यस्तो तालमेल आउने केन्द्रीय तथा सङ्घीय प्रदेशको चुनावमा पाउनुहुन्न । तालमेल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । दलहरू एकआपसमा तालमेल गरेर चुनावमा गयो भने कुनै किसिमको द्वन्द्व हुने सम्भावना रहँदैन ।
नेपाल औषधि ल�